အကူအညီလို​သူတွေအများ​ကြီးပါ ( သူတို့အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ )(2) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အကူအညီလို​သူတွေအများ​ကြီးပါ ( သူတို့အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ )(2)
အကူအညီလို​သူတွေအများ​ကြီးပါ ( သူတို့အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ )(2)
Posted by မိုးပွင့်ဖြူ on Sep 22, 2011 in Community & Society, Events/Fundraise |6comments
by ဆရာလေး ကိုကြည်နိုင် on Thursday, September 22, 2011 at 5:50am
( ဒီစာကို အမ မစု က တောင်းဆိုလို့ ရေးသားလိုက်တာပါ….အမ က မန္တလေး ဂေဇက် မှာ ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းလေး အကြောင်း ရေးသားရာမှ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ သူတွေ ရှိလာတယ်…သူတို့ က အဖွဲ့ လေးအကြောင်း မေးနေကြတယ် ..ရေးပေးပါဦး လို့ဆိုလာတော့ ကျွန်တော်ကပဲ အဖွဲ့ သမိုင်းကို တင်ပြပေးဖို့တာဝန်ယူလိုက်ပါတယ်…)
ပထမဆုံး အဖွဲ့ လေး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံက စပြောပါ့မယ်..၂၀၁၀ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်ဆန်းပိုင်း ညလေး တစ်ညမှာပေါ့…ဆရာဝန် ပေါက်စလေး ၃ယောက်(သူကြီး ဘစီ ၊ဆရာလေး ကိုကြည်နိုင် ၊ဆရာ တွတ်ပီ ) အမှတ်မထင် ဆုံစည်းမိရာက မိသားစု ဆန်ဆန် ရိုးသားတဲ့ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့တောသူတောင်သားများရဲ့စရိုက်လက္ခဏာလေးများနဲ့မွှေးပျံ့ နေတဲ့ရွာလေး တစ်ရွာကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တည်ဆောက်ကြဖို့သဘောတူပြီး အဲဒီညမှာပဲ ရွာကို အုတ်မြစ်ချ တည်ဆောက်လိုက်ကြတယ်…Ning.com ပေါ်မှာ တည်ဆောက်တဲ့ရွာလေးကို အမည်ပေးဖို့စဉ်းစားတော့ ကျွန်တော်တို့၃ ယောက်လုံး ပြေးမြင်လိုက်တာက မြိုင်ရာဇာ တွတ်ပီ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့..ဒါနဲ့အထူးတလယ် တိုင်ပင်နေစရာမလိုပဲ ကြုံတိုင်းရွာ ရယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်..အမည်နာမတွေကိုလဲ တွတ်ပီ ဇာတ်လမ်းလေးထဲက အတိုင်းပဲ ယူလိုက်ကြတယ်..အဲဒီကစပြီး ကျွန်တော်လည်း မြိုင်သာယာ ကနေ အသဲကွဲပြီး ရောက်လာတဲ့ကျောင်းဆရာလေး ကိုကြည်နိုင် ဖြစ်လာပါရောလေ..(နမိတ်ကိုက မကောင်းပါလားနော်)…ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်း ရွာထဲမှာ ဗိုက်ကလေး ၊လူပျိုကြီး စောတင်မောင် ၊ပုဆွဲမိ ၊မသေးမျှင် ၊ဆေးဆရာကြီး ဦးဧရာချမ်း ၊အတီး ၊သာဂိ ၊ အာနိုးလှမိုး စတဲ့ စတဲ့ဆရာဆွေမင်း (ဓနုဖြူ ) ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့အမည်သညာ ယူလိုက်ကြပြီး တကယ့်ကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အသိုက်အဝန်းလေး တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ ပါတယ်..ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့စတင် သန္ဒေတည်ခဲ့ ပုံလေးပါ….
အဲဒီ အွန်လိုင်းရွာလေးနဲ့မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့အခုလို Village KD Donation Group ရယ်လို့ဖြစ်လာစေမယ့် နောက်ခြေလှမ်းတစ်ခုကို ဆက်လှမ်းခဲ့ ကြတယ်..ဒါကတော့ ရွှေပြည်သာ အစွန်က မြိုင် သီလရှင် ကျောင်း မှာ ယနေ့အောင်မြင်နေတဲ့ဆေးခန်းလေးကို စတင်အခြေတည်မိတာပါပဲ…ဆရာဝန်ဖြစ်သော်လည်း အလုပ်အကိုင် မရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီအကို တတွေ ရွှေပြည်သာမှာ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းလေးလုပ်ဖို့လိုက်ရှာရင်း မြိုင် ဆိုတဲ့သီလရှင် စာသင်တိုက်လေးဆီ ရောက်လာခဲ့ ကြတယ်…ကျောင်းထိုင်ဆရာကြီး က ဒေါ်သုနန္ဒာ…အဲဒီ အချိန်က မြိုင်ကျောင်းဟာ ယခုလို ခမ်းခမ်းနားနား မဟုတ်သေးပါဘူး…တမံတလင်းပေါ်မှာ နေဖြစ်အောင် ဝါးတွေ ထရံတွေကို ပြုပြင်ပြီး နေခဲ့ ကြရတာပါ…ဆရာကြီး ဒေါ်သုနန္ဒာ ဟာ ကျောင်းမှာ မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များကိုလည်း မွေးစားထားပါတယ်..ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် ကျွန်တော်တို့ စရောက်တော့ မ်ိဘမဲ့ ကလေး ၂၀ ကျော် ရှိပါတယ်..နောက် ကျောင်းမှာ အဲဒီအချိန်က အင်မတန် ရှားပါးတဲ့အခမဲ့မူလတန်း ပညာရေး ကိုလဲ ဖွင့်လှစ်ထားပါသေးတယ်…ရွှေပြည်သာနယ်တဝိုက်က နွမ်းပါးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် ဆရာကြီး ဒေါ်သုနန္ဒာက ပညာလည်းပေး လိုအပ်တဲ့ခဲတံ ၊ စာအုပ်တွေရော ပေးပြီး ပညာသင်ပေးနေခဲ့ ပါတယ်..အဲဒီလို မနိုင်ဝန်တွေ ထမ်းနေရရှာတဲ့ကြားကပဲ ဆရာကြီး ဒေါ်သုနန္ဒာဟာ ကျောင်းမှာ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း အောင်မြင်အောင် လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောလာပါတယ်…ကျွန်တော်တို့ ညီအကို တတွေဟာလည်း ဆရာကြီး ကို ပါရမီဖြည့်တဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်..စနေနေ့ တိုင်း ဆေးခန်းလေး ဖွင့်ခဲ့ ပါတယ်…ကျောင်းပိုင်မြေဧရိယာ ကလည်း ကျဉ်း ၊စာသင်ခန်းနေရာတွေလဲ ရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆေးခန်းအတွက် နေရာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရယ် မပေးနိုင်ခဲ့ ဘူး…လွှတ်တဲ့ နေရာ ကုတင်ချပြီး ဆေးကုခဲ့ ရတယ်…ကလေးတွေ စာသင်တဲ့ စားပွဲလေးတွေကို ဆက်ပြီး ကုတင်လုပ်ခဲ့ ကြရတယ်…ဆေးဖိုးကိုတော့ ဆရာကြီးက အဓိက ထောက်ပံ့ ပေးပါတယ်..ကျွန်တော်တို့ ကလည်း တတ်နိုင်သလောက်လေးတွေ ဝယ်သင့်တာ ဝယ်ပေါ့ဗျာ..အဲလိုနဲ့ဆေးခန်းလေး ရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ဆေးခန်းနေရာကတော့ တစ်နှစ်ခွဲလောက် ရှိလာတဲ့အထိ တိတိကျကျရယ် ဖြစ်မလာခဲ့ သေးဘူး..အရင်လိုပဲ လွှတ်တဲ့ နေရာဟာ ဆေးခန်း ဖြစ်နေတုန်းပဲ..အခုတော့ ဆေးခန်းနေရာ ရနေပါပြီ…ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့Village KD Clinic လေး အခြေတည်ခဲ့ ပုံလေးပါ…
အောက်ပါ ပုံများမှာ ယခင် ဆေးခန်းလေး အစပိုင်း မှ ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်
ဆေးခန်းလေးရှိရာ မြိုင် သီလရှင် ကျောင်း
ဆေးပေးတဲ့အဖွဲ့ 
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ လေးကို စိတ်ကူးသစ်တွေ မွေးဖွားပေးခဲ့ တာကတော့ မြိုင်မှာ လုပ်တဲ့သီလရှင် အပါး (၄၀၀ ) ဝတ်ပွဲပါပဲ…အဲဒီပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာကလည်း ဆွမ်းတစ်နေ့ စာ တာဝန်ယူချင်တယ် ဆိုပြီး ရွာထဲမှာ တိုင်ပင်လိုက်တော့ အားလုံးက စိတ်ပါဝင်စားရှိတာနဲ့ဆရာကြီး ဒေါ်သုနန္ဒာ ဆီမှာ ဆွမ်းတစ်နေ့ စာ လှူဒါန်းဖို့စာရင်းပေးလိုက်ပါတယ်…Village KD Donation Group ရဲ့ပထမဆုံး အလှူ လို့ပြောရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..အဲဒီအလှူမှာ အမှတ်တရတွေကတော့ အများသားဗျာ..ဆွမ်းဟင်းချက်တာက ကြက်သားနဲ့အာလုး ပြီးတော့ ပါလချောင်ကြော်တယ်..အဲဒီအလှူတုန်းက ကူညီပေးခဲ့ တဲ့MACF အဖွဲ့ က အကိုများကိုလည်း အမှတ်ရ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်…ဆွမ်းဟင်းချက်တဲ့ဓမ္မာရုံထဲမှာ ညီအကိုတစ်တွေ ပုဆိုးလေးတွေခြုံပြီး ကွေးခဲ့ ရတာ မှတ်မိတယ်…ခြင်ကလည်း ကိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း..အဲဒီနေ့ က ချက်စားဖို့သူ့ ကိုယ်လုံးလောက်ရှိတဲ့ဘူုးသီးကြီး သယ်လာတဲ့ကျောင်ဝင်းဌေး ကိုလည်း ဘူးသီး ရယ်လို့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ကြတယ်…အလှူနေ့ မှာ ကားစီးလုံးငှားပြီး မြိုင်ကို သွားကြတော့ ဗိုက်ကလေး ကို မေ့ပြီး ကျန်ထားခဲ့ မိလို့သူ့ ခမျာ နောက်မှ လိုင်းကားစီး လိုက်ခဲ့ ရတာကလည်း အမှတ်တရပါ…သူက အလှူမှာ ရိုက်ကူးရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ သူပါ..အလှူမှာ ဆရာလေးတွေကို ဆွမ်းကပ်တာအပြင် ကျန်းမာရေး ပညာပေး ဟောပြောတာ ၊လက်သဲညှပ်ပေးတာ စတဲ့ဝေယျာဝစ္စ တွေကိုလည်း လုပ်ပေးခဲ့ ကြပါတယ်…ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပထမ အလှူ အကျဉ်းချုပ်ပါ..
ဒုတိယ အလှူ ကိုတော့ ဒဂုံအရှေ့ ပိုင်းက သုခရိပ်မြုံ ဆိုတဲ့HIV ပိုး ကူးစက်ခြင်းခံနေရတဲ့မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ ဂေဟာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်…ဒီအလှူမှာ ကလေးငယ်များနဲ့အတူ ကစားနည်းများ ဆော့ကစားခြင်း ၊ကဗျာရွတ်ခြင်း ၊သီချင်းလေးများနဲ့ကပြခြင်း ၊သီချင်းများ သီဆိုပြခြင်း စတဲ့ကလေးငယ်များအား ပျော်ရွှင်စေမယ့် အစီအစဉ်များ ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်..ကလေးငယ်များအတွက် လိ်ုအပ်တဲ့အသုံးအဆောင်များနဲ့အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ ကြပါတယ်…အရွယ်နဲ့မမျှအောင် ရောဂါ ခံစားနေရရှာတဲ့ကလေးငယ်များအတွက် တစ်နေ့ တာပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကို ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်…ဒီအလှူမှာ အမှတ်ရစရာကတော့ အလှူလာကြတဲ့မောင်နှမတွေကို ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပါ.မောင်နှမတွေအတွက် ပျော်ရွှင်စရာ ပွဲလေး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်..ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်ဥ ၊မြဟသာင်္ ၊ငှက်ပျောသီး စတဲ့ စတဲ့ပစ္စည်းများကို ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးခဲ့ ကြလို့ဂွတီး ဂွကျ နဲ့အင်မတန် ပျော်ရွှင်ခဲ့ ရပါတယ်…(ကျွန်တော်ကတော့ ကြက်ဥ မဲပေါက်ပါတယ် ..:P )
View all posts by မိုးပွင့်ဖြူ →
အကူအညီလိုသူတွေ အများကြီးပါ -၁ နဲ့ ၂ ကို ဖတ်ကြည့်တော့ တစ်ကယ်က တစ်ပုဒ်ထဲ ၊ ၁ က စာစုံတယ် ၊ ၂ က စာတချို့နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ပါလာတယ်၊ ၁ က ၀င်မန်းလို့ မရဘူး၊ နှစ်ခုပေါင်းပြီး တစ်ပုဒ်လုပ်ရမှာ မိုးပွင့်ဖြူကတော့ ပြန်ပြင်လို့ ရမယ်မထင်ဘူး MG က သူကြီးက ကြုံတိုင်းက သူကြီးနဲ့ အဖွဲ့ ကို ၀င်ကူညီမှ ဖြစ်မှာ..
ကျွန်တော်လဲ အလုပ်ထဲ ရောက်တဲ့အထိ တွတ်ပီပရိသတ်ဆိုတော့ ဒီအဖွဲ့နဲ့က မမြင်ဘူးပေမဲ့ အချင်းချင်းတွေလို့ ပြောလို့ရတယ်နော..
ဓါတ်ပုံထဲက ပုံတွေအရတော့ ကြုံတိုင်း ရွာသူ ရွာသားတွေက ကျွန်တော့်ထက် ငယ်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို စေတနာအပြည့်နဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ချီးလဲ ချီးကျူး လေးစားစိတ်လဲ ဖြစ်မိပါတယ်
၁ မှာ ဦးပါလေရာ မန်းထားသလို တတ်နိုင်သလောက် လှူလို့ရမယ် ဆိုရင်တော့ လှူချင်ပါတယ် ၊ ကောင်းတာက ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလို့ရမဲ့ အမည် နဲ့ ဖုံးနံပတ်လေး ဖော်ပြပေးရင်ကောင်းမယ် ၊ လိုက်ကောက်မဲ့သူ ရှိတယ်ဆိုတော့ အဲဒါကတော့ လှူတဲ့သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေမယ်
ဒီရွာထဲမှာလဲ ဒေါ်ပဒုမ္မာက ၂၀၀၀ အဖွဲ့လေး အကြောင်း ဖော်ပြတယ် ၊ ကြုံတိုင်းရွာသားတွေကလဲ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ လိုအပ်နေတာတွေ ရှိရင် ဒီရွာထဲမှာ ပို့စ်လေး တင်ရင် အလှူရှင်တွေ ပေါ်လာမှာပါ.
စေတနာမှန်ကြတဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုတွေ ရကြမှာပါ….
ဟုတ်ကဲပါ အရင်ကစာတွေပဲပါသွားလို ပုံတွေနဲဆိုပိုကောင်းလိုပြန်တင်လိုက်တယ်
စေတနာမှန်ကြတဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုတွေ ရကြမှာပါ….’
စေတနာ အကျိုးပေး မြန်ပါစေ လို့ ဆု တောင်း ပေးပါတယ်။
ပရဟိတ လုပ်ငန်း ၀ါသနာ ဆို တာ ထင် သလောက် မလွယ်ပါဘူး။
စီး ပွားတခု အခိုင်အမာ မရှိ သေးခင် ငယ်ရွယ် စဉ် ဘ၀ ထဲ က စ လုပ် ရ မှာ ဆို ပို ပြီးတော့ ခက် မှာ ပါ။
ဒါပေမဲ့ လူငယ်တွေ ရဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းမှာ လူငယ်တွေ ရဲ့ active ရှိရှိ ၀န်ဆောင်မှု ကလည်း အကူညီ
လို အပ် သူတွေ အတွက် ပို ထိရောက် တယ်။
လူငယ်တွေ ဦးဆောင်မှု နဲ့ လူငယ်တွေ ကို တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားကြ တဲ့ အတွက် ပို မို လေးစား သာဓုပါ လို့။
ကိုယ်တိုင်ဝင်ကူဖို့အဆင်ပြေချင်မှ ပြေမှာမို့လို့ အလှူငွေ ထည့်ပါရစေ။ အလှူငွေမဟုတ်တဲ့ တခြားအသုံးဆောင်တွေ လှူလို့ရရင်လဲ သိချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆေးခန့်းနေရာ မှာဘဲ သွားလှူကြတာ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အတုအယောင်တွေကြားမ၀င်အောင်ပါ.။